Musiibo Ayaan Kooxdayda Ku Ahay Si Aan Ugu Qanciyo In Ay Lacag Kharash Garayso- Antonio Conte Oo Heer Kale Gaadhsiiyay Cabashadiisa. – GOOL24.NET
Musiibo Ayaan Kooxdayda Ku Ahay Si Aan Ugu Qanciyo In Ay Lacag Kharash Garayso- Antonio Conte Oo Heer Kale Gaadhsiiyay Cabashadiisa.
Antonio Conte ayaan marnaba ku qancin sida aanu maamulka kooxdiisa Chelse ugu hagar bixin in ay u soo iibiyaan ciyaartoy muhiim ah oo uu Stamfrod Bridge kaga tartamo wuxuuna waqtiyo aad u badan ku celceliyay in aanu la dhacsanayn siyaasada suuqa kala iibsiga ee kooxdiisa Chelsea balse waxa uu hadda u muuqdaa mid heer kale gaadhsiiyay.
Ka hor kulanka ay West Brom la ciyaari doonaan, Antonio Conte ayaan si aan hore loo arag muujiyay in aanu ku faraxsanayn xaalada suuqa kala iibsiga ee Chelsea iyo sida aanu u helin wixii uu ka doonayay. Inkasta oo ay sanado badan Chelsea ahayd koox halis wayn ku haysay suuqa kala iibsiga, Conte ayaan nasiib u yeelan in uu helo maal galintii uu filayay.
Antonio Conte ayaa saxaafada ka hor sheegay in kooxdiisa uu musiibo ku noqday si uu ugu qanciyo in ay lacag suuqa galiyaan oo ay ciyaartoy la soo saxiixdaan. Marka laga reebo Alvaro Morata, maamulka Blues ayaan hal ciyaartoy oo ay lacag badan ka soo bixiyeen keenin Stamfrod Bridge waqtigii uu Conte maamulayay.
Antonio Conte oo ka hadlaya waajibaadka isaga saaran ayaa yidhi: “Aniga shaqadaydu waa in aan isku dayo oo aan horumariyo ciyaartoy kasta iyo dhinac kasta. Maskax ahaan, rabitaan ahaan, rajada lagu dagaalamayo iyo dhinacyada tatikada, haa tan ayaa ah shaqadayda, shaqadan aad ayaan anigu ugu fiicanahay”.
Laakiin Conte oo duur xun aan hore loo arag u samaynaya maamulka iyo mulkiilaha kooxdiisa Chelsea isla markaana cabasho xoogan muujinaya ayaa yidhi: “Waxaan filayaa in aan musiibo ku yara ahay si aan kooxdayda ugu qanciyo in ay ciyaartoy soo iibsato. Waxaan filayaa in dhinacan aan horumar ka samayn karo, waxaa waajib igu ah in aan wax ka barto tababarayaasha kale ee dhanacan, wax badan ayaan dhinacan ka baran karaa”.
Antonio Conte oo si layaableh iskugu xidhaya tababarayaasha lacagta badan kooxahooda ka hela iyo sida aanu isagu u helin taas ayaa yidhi: ‘Anigu ma aqaan, waxaa waajib igu ah in aan in badan la hadlo tababarayasha sida aadka iyo aadka ah ugu fiican in ay kooxahooda ku qanciyaan in ay lacag kharash gareeyaan oo ay soo iibsadaan ciyaartoy heer sare ah”.